Fanafihana teny Ambohimanarina : Niboraka ny tsinain’ilay mpamily -
AccueilSongandinaFanafihana teny Ambohimanarina : Niboraka ny tsinain’ilay mpamily
Lehilahy iray, mpamily irony fiara “personnel”, ana orinasa iray eto an-drenivohitra no nipotsaka tsinay , vokatry ny fanafihana nataona andian-dehilahy teny Ambohimanarina , ny sabotsy alina, tokony ho tamin’ny 10 ora tany ho any. Iny avy nanatitra mpiasa teny amin’ny manodidina iny ity farany, ary handeha hiverina hamonjy ny toeram-piasany teny Ivandry , no notafihana jiolahy nitondra fitaovam-piadiana toa ny antsy maranitra. Notrobaran’ ireo olon-dratsy ireo io zava-maranitra io ny kibon’ilay saofera , ka nivoaka tety ivelany mihitsy ny tsinainy. Rehefa tsy nahatsiaro tena intsony io lehilahy io dia natsipin’izy ireo teny amin’ny arabe, ary noentin’ireo jiolahy ireo nitsoaka ilay fiara Mazda miloko fotsy avy eo. Olona tsara sitrapo, sendra nandalo no nahita ity mpamily ity nitsirara teny an-dalana, ka nibata azy avy hatrany tao anaty fiarany. Io olona io ihany no nitondra ity mpamily niharan’ny fanafihana ity teny amin’ny hopitaly HJRA. Tsy mahagaga ny resaka halatra fiara eto an-drenivohitra ary mirongatra mihitsy izany amin’izao fotoana izao. Ary matetika dia ireny fiara “Mini-bus” ireny no tena lasibatra amin’izany. Raha ity nitranga teny Ambohimanarina ity no asian-teny, dia an-keviny ho tetika efa nomanina izany.
Mety efa tsikaritr’ireto mpangalatra fiara ireto ity fiara ity , fa manatitra olona eny an-toerana foana, ka nandrasan’izy ireo kendry tohana. Tao anaty fotoana fohy ihany koa no nanatanterahan’ireo mpanafika ireo ny asa ratsiny, ka izay no antony tsy nahatratrarana azy ireo. Rehefa eo am-pelatanan’ireo mpanao ratsy ireo ny fiara hangalariny dia lokoin’izy ireo, ary soloiny ny nomerao, amin’izay miova endrika tanteraka izany ka sarotra ny mamantatra azy. Na eo aza anefa izany, dia tsy maintsy sarona foana ireo atidoha niketrika rehefa halalinina ny fanadihadiana sy ny fikarohana hataon’ireo manampahefana. Tsikaritra hatreto, fa tsy mahasakana ireo mpanao ratsy hanao ny fanaony mihitsy ny fisian’ireo mpitandro ny filaminana manao fisafoana matetika ny tanàna sy ny elakelan-trano rehetra, isaka ny boriborintany, mba hampandriana ny fahalemana. Ankoatra ny halatra fiara dia tsy mitsahatra ny handrenesam-peo ihany koa ny halatra moto ary efa malaza hatrany amin’ny faritanin’i Toamasina izany ankehitriny. Ireo moto izay mijanona eny amin’ny sisin-dalana no tena hataon’ireo mpangalatra ireo mahita faisana. Ny resaka vonoan’olona mandritra ny fanafihana mitam-piadina mahery vaika , izay mihatra amin’ireo tokantrano maro na eto an-drenivohitra, na any amin’ny faritra somary lavitra an’Antananarivo moa dia tsy asian-teny intsony.
Efa manomboka miroso tsikelikely amin’ny fampitomboana ny voka-bary i Madagasikara. Araka izany, nosantarin’ny Fitondram-panjakana teny Iavoloha, omaly ny fampahafantarana izany. Tamin’izany indrindra no nitondran’ny minisi-panjakana misahana ny Fambolena sy Fiompiana, Rivo Rakotovao, niaraka tamin’ny Masoivohon’i ...Tohiny